बढी महत्वाकांक्षी घोषणापत्र
आसन्न निर्वाचनको पूर्वतयारीस्वरूप दुई प्रमुख गठबन्धनसहितका धु्रवीकृत राजनीतिक दलहरूले अत्यन्त प्रिय लाग्ने र महत्वाकांक्षी घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गर्दै जनतामाझ अग्निपरीक्षामा उत्रिएका छन्। उनीहरू त्यही घोषणापत्रको सहारामा जनतामाझ भोट माग्न धाइरहेका
मागेर दल चलाउनेले देश कसरी चलाउलान् ?
राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टी मागेर चलाउने गरेका छन्। उनीहरु सबै सत्ता र शक्तिको बलमा पैसाको जोहो गर्छन्। सत्तामा पुग्न नसक्नेले जनताको सहारा लिन्छन् अनि सत्तामा पुगेपछि पारा उही। मंसिर
नेपाल टेलिकम कछुवाको तालमा भो
नेपाल टेलिकमभन्दा ५ महिनापछि फोरजी सेवा थालेको एनसेलले देशभरका १९ शहरमा विस्तार गरिसकेको समाचार आउँछ तर नेपाल टेलिकम यो मामिलामा निदाइरहेको छ। उल्टो नेपाल टेलिकमले अन्य शहरमा फोरजी सेवा
सडक जामले सधैँ सास्ती
हाम्रो देशको विकास ज्यादै सुस्त छ। ४ दशकदेखि राजधानी जोड्ने मुख्य मार्ग पृथ्वी लोकमार्ग एउटै छ। अहिले त्यो मार्गमा निर्माणाधीन नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको दर्जनौँ स्थानमा पहिरोको उच्च जोखिमले यात्रा गर्दा
लामो राजमार्गको बिजोग
पूर्व–पश्चिम राजमार्गका पुलहरूको अवस्था जीर्ण छ। तत्कालीन सोभियत संघ सरकारको सहयोगमा निर्मित अधिकांश पुलहरू लामो समयदेखि मर्मतको अभावमा जीर्ण बन्दै गएका हुन्। पछिल्लो समयमा भारत सरकारको सहयोगमा पनि केही
दाइजो प्रथा र बालविवाह सामाजिक कुरीतिविरुद्ध लामो समयदेखि बहस चलिरहेको छ। घूस लिन र दिन हुन्न भनेभैंm दाइजो लिन र दिन हुन्न भन्ने कुरा सबैको मनमस्तिष्कमा कण्ठस्थ छ तर पनि
नेपालमा अहिले ‘राजनीति’ शब्दलाई सकारात्मकभन्दा नकारात्मक किसिमले चित्रण गर्ने प्रवृत्ति छ। अनियमित, अस्वाभाविक, अनैतिक काम र घटनासँग राजनीतिलाई परिभाषित गर्नेहरूको संख्यामा पनि कमी छैन। वास्तवमा, स्वच्छ र निःस्वार्थ दूरदर्शी
आचार संहिताको पूर्ण पालना होस्
आगामी मंसिर १० र २१ गते २ चरणमा हुन लागेको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलहरूले आचार संहितालाई अक्षरशः पालना गर्न जरुरी देखिएको छ। हुन त गुण्डा, नाइके र भ्रष्टाचारीलाई
स्थापित मान्यता र पहिचानलाई विवादमा नतान
नेपाल सानो देश भए तापनि एउटा सानो संसारको रुपमा मानिन्छ। नेपालको हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा विभिन्न जातजातिहरुको बसोबास रहेको छ। जसरी यहाँका जातजातिमा विविधता पाइन्छ, त्यसरी नै पूर्व
संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन जरुरी
मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ। प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशका समानुपातिक सांसदको उम्मेदवारको सूची निर्वाचन आयोगमा पेस गरेसँगै निर्वाचन प्रक्रिया पूर्णरुपमा शुरु भइसकेको छ। निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भइसक्दा पनि निर्वाचनसम्बन्धी आशंका घटेको
जेल जाने पालो अब कसको ?
विधिको शासनलगायत राज्यका सबै मान्यता र लोकतन्त्रको मूल्यलाई चुनौती दिँदै खुला घुमिरहेका कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कसुरदार बालकृष्ण ढुंगेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेर जेल हाल्न सफल भएको छ। माओवादी नेता ढुंगेललाई
अलग–अलग मतपत्र अवाश्यक छ र ?
निर्वाचन आयोगले दुई खालका मतपत्र छप्नु निश्चय नै जटिल र झन्झटिलो कार्य हो। तर यो कार्य राज्यको थप व्यापार पनि हुन सक्छ। तर सम्पूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्दै संविधान कार्यान्वयन
काठमाडौँको न्यूरोड सधैँ व्यस्त रहन्छ। दैनिक अथाह मानिसको चाप र भीडभाडले भरिएको यो ठाउँमा अनेक प्रकारका मानिसको आगमन हुने गर्दछ। पैदल यात्रीदेखि लिएर व्यापारी अनि सहयोगका लागि हात फैलाउने
अदुवा आयात–निर्यातमा असहजता
नेपाल र भारतबीच आयात–निर्यातको व्यापार सदियौं पुरानो हो। तर, यो आयात–निर्यातको व्यापार नेपालका लागि सहज छैन। नेपालले पटक–पटक समस्या झेल्नुपरेको छ। अहिले अदुवाको सिजन हो। तर, नेपाली कृषकले अदुवा
वालुङ जातिको चाखलाग्दो विशेषता
नेपालको हिमाली क्षेत्रमा बसोवास गर्ने प्रमुख जातिमा वालुङ जाति पनि एक हो। यो जातिको प्राचीन थलो विशेष गरी पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लाको ओलाङ्चुङ्गोला, याङ्मा, घुन्सा, लुङ्थुङ, लेलेप आदि हिमाली
सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत दुई पक्षीय विषयहरुको पुनरवलोकनका लागि सिफारिस गर्न बनेका प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको पाँचौं बैठक काठमाडौंमा हालै सकिएको छ। तर, यसपटक पनि त्यसमा नेपालको
नेतृत्वप्रति पूर्वराजाको चासो
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफू मुलुकको नेतृत्व र जिम्मेवारी लिन तयार रहेको खुलेरै सार्वजनिकरूपमा बताएका छन्। भाइटीका ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वराजा शाहले मुलुकमा नेतृत्व नै नभएको जस्तो देखिएको
नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि देशभित्र आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, फलफूल र तरकारी विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषिक्षेत्रमा संलग्न भए पनि कृषिको औद्योगिकीकरण हुन नसक्दा उत्पादन
शंखधर साख्वा, नेपाल संवत् र हाम्रो दायित्व
नेपालको आफ्नै मौलिक नेपाल संवत् तिहारको चौथो दिन अर्थात् कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाको दिनबाट शुरु भएको थियो। तिहारको भाइटीकाभन्दा अघिल्लो दिनबाट नयाँ वर्ष नेपाल संवत् शुरु हुने दिन राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति,
फूलमा पनि भारतकै भर ?
नेपालीले दशैं मनाउन पनि भारतकै भर पर्नुपरेको थियो। दशैंमा अत्यधिक खपत हुने खसीबोका र भेडाच्याङ्ग्र्राका लागि नेपाली सधैँ भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि जारी भयो। अब तिहार आउँदै छ,